1. ISebe leMfundo leNtshona Koloni (iWCED) lalicelwe liSebe leMfundo esiSiseko likazwelonke ukuba lazise zonke izikolo ezifundisa izifundo zobugcisa kwiPhondo leNtshona Koloni ngokuqaliswa kwezifundo ezigxininisa kubugcisa (technical specialisation subjects) kuqukwa i-Technical Mathematics kunye ne-Technical Sciences, zezikolo zobugcisa.
2. Zonke izikolo zazisiwe ngeNgcaciso eMfutshane yeCandelo loPhuhliso lweKharityhulam yeFET DCF 0005/2015 ngomhla wokuqaliswa kwenkqubo leyo.
3. Impumelelo yokuqaliswa kwezifundo zobugcisa ezitsha, kuqukwa i-Technical Mathematics kunye ne-Technical Sciences, ixhomekeke ekuqeshweni kwabasebenzi abanezakhono ezifunekayo kunye nolwazi lwekhontenti.
4. Ngoko ke kuyimfuneko ukuba kuqeqeshwe utitshala abaya kufundisa izifundo zobugcisa ezitsha. ISebe iWCED lityumbe amaziko axhotyiswe ngokukuko akufaneleyo ukuqhuba uqeqesho lwaba titshala.
5. Kubalulekile ngoko ke ukuba basebenzisane bonke utitshala abasuka kwizikolo zobugcisa ukuqinisekisa ukuba utitshala abafundisa i-Civil, Electrical ne-Mechanical Technology, ne-Technical Sciences, bayaya kwiiseshoni ezimbini zoqeqesho lweentsuku ezintlanu ukususela ngoMvulo ukuya ngoLwesihlanu ngethuba leeholide zesikolo zikaJuni nezikaSeptemba ka-2017.
6. Utitshala abatyunjelwe ukufundisa i-Technical Mathematics bamele ukuya kwiseshoni yoqeqesho lweentsuku ezintlanu ukususela ngoMvulo ukuya ngoLwesihlanu ngethuba leeholide zesikolo zangoMatshi nangoJuni ngo-2017. Iya kuba yaziswe kwakamsinya imihla neendawo ezichanekileyo.
7. Izifundo ezigxininisa kubugcisa ze-CAPS, i-Technical Mathematics ne-Technical Sciences zaqaliswa kwiBakala 10 ngo-2016. Ezi zifundo ziya kuqaliswa kwiBakala 11 ngo-2017 nakwiBakala 12 ngo-2018. Ngoko ke, uqheliso noqeqesho lokuxhotyiswa ngezakhono kutitshala beBakala 12 maluqhubeke ngo-2017.
8. Kucelwa wazise okukule ngcaciso imfutshane bonke utitshala esikolweni sakho ukuze bakuthathele ingqalelo.